Maxkamadeynta Askari dad Shacab ah Muqdisho ku dilay oo bilaabatay – Radio Baidoa
Maxkamadeynta Askari dad Shacab ah Muqdisho ku dilay oo bilaabatay
By Webmaster	 On Jun 29, 2020
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa Maanta waxaa ay bilaawday dhageysiga dacwadda askari 24-Kii Bishii Apriil xilli habeen ah Magaalada Muqdisho ku dilay laba qof oo Shacab ah.
Askariga oo lagu Magacaabo Dable Boolis Xasan Aadan Xasan ayaa waxaa 1-dii Bishii Ramadaan uu agagaarka Isgoyska Jubba, iyada oo uu Magaalada Bandow la xiriira ka hortagga COVID-19 ka jiro uu ku dilay Xasan Cali Cadaawe iyo Madiino Cabdullaahi Cabdi.
Xeer ilaalinta Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida oo soo eedeysay Dable Boolis Xasan Aadan Xasan iyo Qareenada u doodayaya Eedeysanaha ayaa maxkamadda hadal-jeedintooda dhageysatay,waxaana goobta la horkeenay markhaatiyaasha.
Xeer ilaaliyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida Cabdullaahi Buulle Kameey ayaa weeydiistay Garsoorayaasha Maxkamadda in lagu xukumo Dable Boolis Xasan Aadan Xasan ciqaab u dhiganta qodobada ku xusan eedooda.
Qareenada u doodayay eedeysane Dable Boolis Xasan Aadan Xasan ayaa codsaday in magta eedeysanaha la saaro Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed maadaama askariga uu fulinayay amarka Taliyaha Booliska ah ee in dadka la kala fogeeyo sababo la xiriira Cudurka Coronavirus.
Ugu dambeyn Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada 1aad ee Ciidamaa Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa soo xiray dhageysiga dacwada loo heystay Dable Boolis Xasan Aadan Xasan oo ka tirsan Saldhiga Booliska Boondheere,waxaana uu sheegay in Go’aanka ay dib kasoo saari doonto.
Baarlamaanka Puntland oo soo saaray 13 Qodob oo diidmo ah
Rag weeraray goob suuq ah oo toogasho lagu dilay
Xukun lagu ridey dad loo heysto kufsi kadhacay galgaduud
Turkiga oo sheegay sida lagu joojin karo dagaalka libya